Xiaomi Mi 9 Pro 5G: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysay dhowr toddobaad inay maanta imaaneyso, dhammaadkeeda sare ee cusub ee leh 5G mar hore ayaa rasmi laga dhigay. Kani waa Xiaomi Mi 9 Pro 5G, telefoon cusub oo ku dhex jira dhamaadka sare ee nooca Shiinaha, kaas oo sannadkan ka ballaadhan weligiis. Shirkaddu waxay nooga tagtay moodel awood leh, oo leh 5G iyo processor-ka ugu awoodda badan ee aan ka heli karno Android.
Xiaomi Mi 9 Pro 5G wuxuu nooga tagayaa isbeddelo taxane ah iyadoo la tixgelinayo qaabka caadiga ah, oo la soo bandhigay bishii Febraayo ee sannadkan. Waxaa ka mid ah processor-ka lagu dhex isticmaalo ama batteriga. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan wixii ku saabsan wararka sheegaya in taleefankan uu hoosta naga tagayo.
Naqshadeynta waxaa jiray wax dhib ah oo cusub. Shirkaddu waxay dayactirka ku haysaa nashqad qaab u dhiganta dhibic biyo ah oo ku jirta taleefanka, oo leh shaashad sawir-qaade ah oo shaashadda ku hoos jirta. Halka gadaasheeda ay saddex kamaradood na sugaan, sida aaladda la soo bandhigay bishii Febraayo ee sanadkan.
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Tilmaamaha Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Xiaomi Mi 9 Pro 5G waxaa loo soo bandhigay inuu yahay dhamaadka-ugu sarreeya kan ugu awoodda badan. Nooca Shiinaha ayaa u heellan taleefan leh processor-ka ugu awoodda badan suuqa, kaas oo na siin doona waxqabad wanaagsan. Isku dheelitirnaan ahaan xagga astaamaha, marka lagu daro sidoo kale inagaga taga batteri wanaagsan, oo warka ku keena culeyska, sidii aan horeyba u ogayn. Marka la soo koobo, taleefan weyn oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Shaashad: 6,39-inji AMOLED oo leh FullHD + xallinta 2.340 x 1.080 pixels
Kaydinta gudaha: 128/256/512 GB
Batariga: 4.000 Mah oo leh 40W Fast Charge, 30W Qi Wireless Charge iyo 10W Reverse Qi Charge
Kaamirada gadaal: 48 MP oo leh f / 1.8 aperture + 12 MP bokeh oo leh f / 2.2 aperture + 16 xagal ballaaran oo ballaaran oo leh f / 2.2 aperture
Kaamirada hore: 20 MP oo leh f / 2.0 aperture
Nidaamka hawlgalka: Android 10 oo leh MIUI 11
Isku xirnaanta: 5G, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, infrared, GLONASS
Kuwa kale: Dareeraha sawirka faraha, NFC, qolka uumiga
Cabirka: 157.21 x 74.64 x 8.54 mm
Miisaan: 196 garaam
Sida aan aragno, Xiaomi Mi 9 Pro 5G waxaa loo soo bandhigay taleefan aad u awood badan. Waxay isticmaashaa Snapdragon 855+ Ka processor ahaan waxay ahayd wax todobaadyadan la isla dhexmarayay oo durba la xaqiijiyay. Marka waxaan ka filan karnaa waxqabadka cajiibka ah taleefankan nooca Shiinaha ah. Waxay ku timaaddaa isku-darka kala duwan ee RAM iyo kaydinta marka lagu daro, waxqabadka wanaagsan. Kaamirooyinka kama aysan beddelin qaabkii bishii Febraayo.
Mid ka mid ah isbeddelada waa batteriga. Telefoonku wuxuu adeegsadaa 4.000 mAh batari awoodda kiiskan, laakiin waxay u taagan tahay taageeradeeda ku-oogista degdegga ah, oo lagu daray nooc cusub oo xawilaad wireless ah, ayaa la soo bandhigay horraantii bishan. Waad ku mahadsan tahay, waxay noqon doontaa suurtagal in lagu buuxiyo batteriga taleefanka bilaa fiilooyin si dhakhso leh, hormar la hubo inuu daneynayo isticmaaleyaal badan. Waxa kale oo ay leedahay dib u soo celin Qi, sida aan ku arki karno qeexitaankiisa.
Xiaomi Mi 9 Pro 5G waxaa lagu soo bandhigi doonaa afar nooc suuqa, ugu yaraan marka laga hadlayo Shiinaha, waxaa la xaqiijiyay inay sidan noqon doonto. Afar nooc oo RAM ah iyo keydinta. In kasta oo xagga midabada laga filan karo laba, kuwaas oo kala ah madow iyo codkaas luul cad, kaas oo astaantu ku isticmaaleyso dhowr taleefannadeeda sannadkan.
Qalabka ayaa horay loogu xaqiijiyay ShiinahaWaqtigan xaadirka ah ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku saabsan bilaabitaankeeda caalamiga ah, in kasta oo hubaal inbadan la ogaan doono toddobaadyo yar gudahood. Maaddaama qalab sidan oo kale ah Xiaomi Mi 9 Pro 5G la hubo in laga bilaabi doono Yurub. Laakiin waxaan ka sugeynaa warka soo saaraha laftiisa. Qiimaha noocyadeeda ee Shiinaha waa:
Qaabka leh 8GB / 128GB waxaa lagu qiimeeyaa 3.699 yuan (qiyaastii 473 euro)
Nooca 8GB / 256GB wuxuu ku kacayaa 3.799 yuan (486 euro)
Nooca 12GB / 256GB ee taleefanka ayaa qiimihiisu yahay 4.099 yuan (525 euro)
Qaabka 12GB / 512GB wuxuu ku kici doonaa 4.299 yuan (qiyaastii 550 euro)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi 9 Pro 5G: Dhamaadka ugu sarreeya ee ugu awoodda badan 5G
Sida loo joojiyo ogeysiisyada WiFi ee Android